Thola ukuthi yimaphi ama-shampoo aqinile kakhulu | Bezzia
Ama-shampoo aqinile kakhulu
USusana Garcia | 04/04/2021 20:00 | Ubuhle, Imikhiqizo yobuhle
La umqondo wama-shampoo aqinile usanda kufika, kepha seziwumkhuba uma kukhulunywa ngokunakekela izinwele zethu. Kungakho-ke kufanele sethule kuwe lokho esicabanga ukuthi yizi-shampoos eziqinile kakhulu emakethe, isethi yezimonyo ezilungele ukunakekela izinwele ezenzakalweni zansuku zonke, ngoba i-shampoo ingenye yezikhiye zezinwele ezinempilo.
I-Los ama-shampoo aqinile eza ngefomethi enobungani bemvelo, ngoba kaningi abanaso isitsha sepulasitiki, kepha futhi, ngokuqina, kusetshenziswa amakhemikhali ambalwa ukudala ukuthungwa kwawo futhi amaningi awo ayimvelo, okulungele amanzi, okungangcolisiwe kangako. Ngakho-ke sicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokudlulela kwizimonyo eziqinile.
1 Izinwele Zengelosi nguLush
2 Izimonyo zikaMaria eziqinile ze-shampoo
3 UDr Tree shampoo kabili koyedwa
4 I-Valquer shampoo yezinwele ezomile
Izinwele Zengelosi nguLush
Le ngenye yamafemu evelele kakhulu ngezimonyo eziqinile, ngoba ayinama-shampoo kuphela, kepha nama-conditioner, uwoyela nazo zonke izinhlobo zezinto. Ama-shampoo aqinile kaLush angenye yezinto ezinhle kakhulu lokho kungathengwa kuwebhusayithi yabo futhi kunezinhlobonhlobo ezinkulu. I-Angel Hair shampoo ingomunye wabathengisi abakhulu, ikakhulukazi ngoba ithambile futhi ilungele zonke izinhlobo zezinwele. Phakathi kwezakhi zayo ine-Ylang ylang yokufaka izinwele futhi ayinakekele. I-Aquafaba ingeza amandla nokukhanya, ngenkathi amanzi ama-rose ne-witch hazel kusiza ukunakekela isikhumba sezinwele esibucayi. I-Soy lecithin isiza ukumunca ezinye izithako. Okuhle ukuthi siyazibona zonke izithako nokuthi yini ngayinye yazo enikela ezinweleni zethu, okusisiza ukuthi sikhethe kangcono.
Izimonyo zikaMaria eziqinile ze-shampoo
Este imoto eqinile ingokwemvelo, i-vegan futhi yenziwe ngezandla. Yinwele elenzelwe izinwele ezinamafutha, ngoba ngezithako zalo lizama ukuxazulula inkinga ye-sebum secretion endaweni yesikhumba, okuyinkinga enkulu yezinwele ezinamafutha. Uwoyela wejojoba awuqukethe unikeza amanzi ngaphandle kokuzwa okunamafutha. Ijusi likalamula yilona elisiza ngamandla alo okucindezela ukulawula ukusebenza kwamafutha. Ubumba olumhlophe lwe-kaolin lusiza ukuhlanza isikhumba sezinto ezingcolile ngendlela emnene, ngaphandle kokuphula i-pH yaso. Ukukhishwa kwe-Hibiscus ne-rosemary kusiza ukugcina izinwele ziqinile futhi ziphilile kusuka ezimpandeni. Akungabazeki ukuthi ukukhetha okuhle ngezithako zawo nokunakekela izinwele ezinamafutha.
UDr Tree shampoo kabili koyedwa
Uma ungenaso isikhathi esiningi semicikilisho yezinwele zakho noma uvilapha, ungathenga futhi ishafu yomzimba eqinile efana noDkt. EMpumalanga ishampoo yephunga likakhukhunathi ilungele izinwele ezinakekelayo nezondlayo. Inowoyela we-argan, esaziyo ukuthi waziwa njengegolide eliwuketshezi ngamandla alo wokunisela nokudla. Ngaphezu kwalokho, inamavithamini A no-E okuvuselela nokunakekela imicu yezinwele. Ibuye ibe nesisekelo sebhotela lukakhokho onakekela isikhumba sasekhanda. Into enhle ngale shampoo ukuthi iyahlanza futhi iphefumule ngamanzi ngakho-ke kufanele ugweme ukusebenzisa i-conditioner.
I-Valquer shampoo yezinwele ezomile
Wonke la mafemu anezinhlobo eziningana ze-shampoo, yize sikhuluma eyodwa kuphela. Isibonelo, lena evela eValquer eyenwele ezomile, noma zikhona zezinye izinhlobo zezinwele. EMpumalanga ishampu yezinwele eyomile inamafutha ayigugu kakhukhunathi ukuyinisela ngamanzi. Kumele kushiwo ukuthi akuyona i-shampoo enezithako zemvelo ngokuphelele kodwa futhi kuhle impela uma ungafuni okuthile kwe-vegan.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Ama-shampoo aqinile kakhulu
Ubisi lwamantongomane lweMacadamia, izinzuzo nokuthi ululungiselela kanjani